भाइ प्रकाश दाहालको सम्झनामा दिदीहरुको भावुक स्टाटस, गंगा लेख्छिन्– तिम्रो सपना पूरा गर्दैछु - Nepal Insider
१३ औँ साग : नेपालले जित्यो फुटबलतर्फको स्वर्ण पदक
भर्खरै नारायणगढ-मुग्लिन सडकबाट अर्को ठुलो दु’खद खबर
भुटानविरुद्ध सुनिल बलको उत्कृष्ट गोल, २-१ को अग्रता
उ’भिएरै सा’ग फुटबलको फा’इनल हेर्दै उर्जामन्त्री
भुटानविरुद्ध नेपालको पहिलो गोल, नेपालले लियो अग्रता
साग उद्घाटनमा नपड्केको पटका पड्काउँदा घाइते भएका बालकको मृत्यु
नेपालले जित्यो ५० औँ स्वर्ण पदक
‘ए कान्छा मलाई सुनको तारा झारिदेउन’ का चर्चित गायक रुद्रमणि गुरुङको निधन
ह्वात्तै घट्यो सुनचाँदीकाे भाउ : तोलाको कति हेर्नुहोस्
सोलुखुम्बुबाट काठमाडौं आउँदै गरेको सुमो दुर्घटना
Home/समाचार/भाइ प्रकाश दाहालको सम्झनामा दिदीहरुको भावुक स्टाटस, गंगा लेख्छिन्– तिम्रो सपना पूरा गर्दैछु
भाइ प्रकाश दाहालको सम्झनामा दिदीहरुको भावुक स्टाटस, गंगा लेख्छिन्– तिम्रो सपना पूरा गर्दैछु
342 Less thanaminute
काठमाडौं । संविधान जारी भएपछि २०७४ साल निर्वाचनमय बन्दै थियो । संविधान सभाबाट जारीको संविधान कार्यान्वयन स्वरुप स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्नपछि संघीय संसदको निर्वाचनको माहौल बन्दै गइरहेको थियो । नेताहरुले आ–आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका थिए । यही बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनकी बुहारी विना मगर पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए । प्रचण्ड परिवार चुनामा होमिएको थियो ।
तर, यही बेला अचानक प्रचण्ड परिवार बज्रपात भयो । २०७४ मंसिर ३ गते प्रचण्डका एक मात्र पुत्र प्रकाश दाहालको निधन भयो । मंगलबार प्रकाशको दोस्रो स्मृति दिवस मनाइँदैछ । प्रकाशको सम्झनामा उनकी दुई दिदीहरुले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक भावुक स्टाटस लेखेका छन् ।
प्रकाशकी दिदी गंगाले भाइको अभावबारे केही लेख्न नसक्ने भनेकी छन् । उनले भाइ प्रकाशले छाडेर गएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कोशिश गरिरहेको बताएकी छन् । फेसबुकमा गंगाले लेखेकी छन्, ‘बाबु कसरी लेखु तिम्रो अभावमा परिवारको अवस्था कस्तो छ, तिम्ले छोडेका जिम्मेवारी पुरा गर्ने कोशिस गर्दैछु बाबु ।’यस्तै अर्की दिदी तथा भारतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालले पनि फेसबुकबाट पनि भाइ प्रकाशप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेकी छन् ।
काम नगर्ने प्रचण्डका घरबेटी पनि जेल जान्छन् : पुर्व सभामुख नेम्वाङ
अझै भारी वर्षाको सम्भावना, २४ घण्टा सचेत रहन आग्रह
कालापानी हाम्रो नेपाल हो!! सके मारीन्छ ,नसके मरीन्छ नेपाली सेना
यस कारण फैलियो राखी सावन्तको विवाहको खबर !! यस्तो फोटो गरिन संजालमा सार्वजनिक
पोखरामा अर्को रहस्य ! १५/१६ सम्पर्क बिहिन भएकी श्रीमतीले श्रीमान बितेको १ वर्षपछि किरिया (भिडियोसहित)
बालबालिकालाई कसरी सिपालु बनाउने ? हरेक अभिभावकले पढ्नैपर्ने कुरा!
घरबेटीले बिजुलीको पैसामा ठगिरहेको छ ? अब कुलमानलाई फोन गर्नुहोस (टेलिफोन नम्बर र तिर्नुपर्ने दररेटसहित)
भर्खरै।चितवन बाट आयो खुसी को खबर. सेयर गरौ
शालिकराम पुडासैनीलाई करेन्ट लगाए अगाडिको सनस*नीपूर्ण भिडियो रवि लामिछानेलाई फसाउने चाल रहेछ : यो भिडियोलाइ धेरै भन्दा धेरै ग्रुपमा शेयर गरिदिनुहोस्।
उच्च प्रसंशा गर्दै भन्न थालियो बधाई एसपी साहेब, कारण यस्तो छ